The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991) – Burmese Subtitle
PG-13 1991 85 min Comedy, Crime
IMDB: 6.9/10 97,971 votes
Anthony James, George Kennedy, Jacqueline Brookes, Leslie Nielsen, Lloyd Bochner, O.J. Simpson, Priscilla Presley, Richard Griffiths, Robert Goulet, Tim O'Connor
ဒီ စုံထောကျကွီး Frank ရဲ့ စှနျ့စားခနျးတှကေတော့ မသိသူမရှိလောကျအောငျ အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့ပါတယျ။ ပွဿနာအမွဲတကျ၊ လုပျတိုငျးလှဲ၊ ကွားထဲမှာ နိုငျငံရေးနဲ့ တခွား ဇာတျကှကျလေးတှကေိုလညျး ကှကျကှကျ ကှငျးကှငျး ရရငျရသလို လှောငျသှားသေးတဲ့ ဒီရုပျရှငျတှဟော ပြျောစရာအကောငျးဆုံးနဲ့ အရယျရဆုံး ဟာသကားတှဖွေဈခဲ့တယျ။ ဒီရုပျရှငျနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အထူးတလညျ ပွောစရာမရှိပါဘူး။ ကွညျ့ပွီးကွသူတှကေတော့ သူ့မကျြနှာမွငျတာနဲ့ ရယျခငျြနမှောပါ။ မကွညျ့ရသေးဘူးလား။ ကွညျ့ဖွဈအောငျ ကွညျ့ကွညျပါ။ တဈကားလုံး လှတျပြျောနရေပါလိမျ့မယျ။
ဒီ စုံထောက်ကြီး Frank ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကတော့ မသိသူမရှိလောက်အောင် အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာအမြဲတက်၊ လုပ်တိုင်းလွဲ၊ ကြားထဲမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တခြား ဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုလည်း ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ရရင်ရသလို လှောင်သွားသေးတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်တွေဟာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အရယ်ရဆုံး ဟာသကားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အထူးတလည် ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ကြည့်ပြီးကြသူတွေကတော့ သူ့မျက်နှာမြင်တာနဲ့ ရယ်ချင်နေမှာပါ။ မကြည့်ရသေးဘူးလား။ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ကြည်ပါ။ တစ်ကားလုံး လွှတ်ပျော်နေရပါလိမ့်မယ်။
Anthony James George Kennedy Jacqueline Brookes Leslie Nielsen Lloyd Bochner O.J. Simpson Priscilla Presley Richard Griffiths Robert Goulet Tim O'Connor
"Weird Al" Yankovic Anthony James David Zucker Ed Williams Gail Neely George Kennedy Gina Mastrogiacomo Jacqueline Brookes Leslie Nielsen Lloyd Bochner Mel Tormé O.J. Simpson Peter Mark Richman Peter Van Norden Priscilla Presley Richard Griffiths Robert Goulet Tim O'Connor Zsa Zsa Gábor
Option 1 drive.google.com 1.32 GB 1080p
Option2mega.nz 1.32 GB 1080p
Option3onedrive.live.com 1.32 GB 1080p
Option4mediafire.com 1.32 GB 1080p